Wafdi uu hoggaaminayo Wasiirka Difaaca Soomaaliya C/qaadir Sheekh Cali Diini ayaa gaaray degmada Beled-Xaawo ee Gobolka Gedo – STAR FM SOMALIA
Wafdi uu hoggaaminayo Wasiirka Difaaca Soomaaliya C/qaadir Sheekh Cali Diini ayaa gaaray degmada Beled-Xaawo ee Gobolka Gedo
Wafdi uu hoggaaminayo Wasiirka Difaaca Soomaaliya C/qaadir Sheekh Cali Diini ayaa gaaray degmada Beled-Xaawo ee Gobolka Gedo, waxaana Wasiirka socdaalkiisa ku wehliyay Guddiyada Baarlamaanka ee Difaaca, Arrimaha Dibedda, Arrimaha Gudaha iyo Guddigga Madaxa bannaan ee Xuduudaha iyo Federaalka saraakiil iyo Khubaro, xubno ka socday Maamulka Jubbaland oo isugu jira Wasiiro iyo Xildhibaano.
Booqashada wafdiga oo qaadatay labo maalin ayaa waxaa loogu kuur galayay xaalada dhabta ah ee ka jirta deegaanka iyo Cabashooyin ka soo yeeray shacabka degan magaalada Beled-xaawo ee ku aadan darbiga Kenya ka dhisaneyso xuduuda.
Socdaalka Wasiirka kadib ayaa waxay booqashadooda ka soo saareen qodobadan hoos ku xusayn
1. In derbi la dhisay aanay muuqan
2. In aanu muuqan Calaamad xuduudeed la bedelay
3. In la qoday god aan ku qiyaasnay 1.6 m oo dhinaca Kenya ku yaal oo u jira 6m calaamadda xuduudda noo ah godkaas oo dherer kiisu yahay ilaa 700m
4. Waxaan Buulo Xaawo dusheeda ku aragnay waddo la xaaray oo baldoozes la mariyey .
Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Mudane C/qaadir Sheekh Cali Diini, ayaa socdaalka kadib uga mahadceliyey shacabka iyo dadweynaha Degmooyinka Doolow iyo Beled-xaawo isagoo ku ammaanay dareenkooda wadaninimo, isla markaana sheegay in shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed aysan marnaba aqbali karin cid walba oo ku xad gudbaysa dalkeena.
“Waxaa si dhab ah kormeer buuxa ugu soo sameynay meelihii la inoogu sheegay in isbadal lagu sameeyey ee xadka labada dal, waxaan soo ogaanay xaqiiqada meesha taala inagoo runtii qaadanay feker fiican iyo aragti uruurin aan dib ugula noqonayno dawladda dhexe iyo cida ay quseyso”ayuu yiri Wasiir Diini.
Ugu dambeyn Wafdiga uu hogaaminayay Wasiirka ayaa gelinkii dambe ee maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho, waxaana waxyaabihii ay ku soo arkeen Beled-Xaawo ay u gudbin doonaan Madaxda dowladda iyo Baarlamaanka.
Ururka Al Shabaab ayaa fagaaro ku yallo deegaanka Labaatan jiroow ee duleedka Magaalada Baydhabo ayey ku toogteen Askari ka tirsanaa ciidamada Dowladda
Diyaarad qaxooti Soomaali waday ayaa ka dejisay Magaalada Kismaayo